Hooyo Muna : “Waan aamin waayay in uu yahay Canug waxa ku jira Bacda ee uu Bahalka ka dul Carary” ( Sawirro) | somalinwo.com
Published on September 2, 2018 by Admin · No Comments
Muna Cabdulqaadir Yuusuf waa hooyo heysata 5 carruur oo agoon ah, si ay nolol maalmeedka reerka u raadiso waxa ay subax waliba u jarmaadaa goob ay Shaah ku iibiso oo ku taalla nawaaxiga Dakada Muqdisho.
Xili ay ku beegneyd 5:15 AM oo subanimo ah ayay ka soo baxday gurigeeda si ay u aado goobta ay Shaaha ku iibiso, nasiib wanaag waxa ay la kulantay dhacdo aan ku cusbeyn maqalkeeda balse ay aheyd markii ugu horeysay ay la kulanto.Waxa ay ku aragtay meel uu ka baxayo geed yuhuud, qashina uu yaallo bac madow uu ku jiro canug saacado dhalan oo wajigiisa dhiig qariyay sababta oo ah marka ay dul istaageysay waxaa ka cararay Bahalka loo Yaqaano Daba-cadeeya.
Hooyo Muna way qeylisay iyada oo Ashahaadaneysa, waxaa ku soo baxay reerihii ka ag dhawaa halka canuga la soo dhigay qaarkood ayaa dhahay waan maqleynay oohinta balse waxaan u heysanay in reerka nagu dhagan uu canug ka jiran yahay, ma aysan garan in ay banaanka u soo baxaan si ay ugu yaraan u arkaan waxa socda.
Hooyo Muna C/qaadir waxa ay ilmaha Yare ee wadada ka qaaday geysay dagmada Boondheere si loo diiwaan galiyo, ka dib waxaa loo qaaday isbitaalka Banaadir halkaasi oo lagu haayay muddo bil iyo labo maalin ah, ma jiro dhaawac gaaray xubnaha kale ee jirkiisa balse waxa uu dhaawac ka qabaa dhanka midig ee madaxa halkaasi oo lafta ay banaanka Soo baxday waxaa loo mariyaa daawooyin soo celinayo Maqaarka jirka.
Hooyo Muna waxa ay u bixisay Maxamed Nasiib mararka qaar Maxamed Sahal ayay ugu wacdaa, wuxuu dhalan yahay 40 maalmood oo 32 ka mid ah isbitaalka uu ku soo qaatay, Hooyadani waxa ay go’aan satay in ay heyso oo ay koriso iyada oo shaqadeeda u joojisay heynta canuga yar inta uu ka caafimaadayo.
Waxa ay u baahan tahay Caawin dowladeed iyo Mid shacab maadaama ay reerkeeda ku maareyneysay Shaah ay iibinjirtay, cid waliba oo wax tari karta fadlan kala xiriir
Allow la Garabgal.
W/Q Nasriin Maxamed Ibraahim